Ngwa - Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd.
Resin mgbanwe cation acid siri ike
Resin mgbanwe cation acid adịghị ike
Resin mgbanwe resion siri ike siri ike
Resin mgbanwe anion adịghị ike
Ngwakọta akwa bed
Osisi adsorbent macroporous
Resin pụrụ iche
Ịdị nro: Ime ka mmiri dị nro ụlọ ọrụ bụ usoro na -eji resin mgbanwe ion iji belata mkpokọta calcium na magnesium. Ngwongwo ala ndị a nwere ike ibute nsogbu na enweghị ike ị nweta ihe n'iji mmiri eme ihe kwa ụbọchị site na ịkpụ calcium na magnesium carbonate akpịrịkpa.
Dịka, a na -eji resin siri ike acid (SAC) wee jiri sodium chloride (brine) megharịa ya. N'ọnọdụ mmiri TDS dị elu ma ọ bụ ọkwa ike siri ike, mgbe ụfọdụ resin SAC na -ebute resin Acid Cation (WAC).
Resins dị nro dị nro: GC104, GC107, GC108, MC001, MA113
Ịkọwapụta ihe: nke na -ezo aka na mbibi, ka a na -akọwakarị dị ka iwepụ cations niile (dịka calcium, magnesium, sodium, potassium, iron na ọla ndị ọzọ dị arọ) na anions (dịka bicarbonate alkalinity, chloride, sulfate, nitrate, silica na CO2) site na ngwọta n'ọnọdụ H+ na OH- ion. Nke a na -ebelata ngụkọta nke ihe etisasịworo etisasịwo. A chọrọ nke a maka ọtụtụ usoro dị nro, dị ka ọrụ igwe ọkụ ọkụ dị elu, nri na ngwa ọgwụ, na mmepụta elektrọnik
Ịmepụta ihe ndị dị n'ọbara nwere : GC107, GC108, GC109, GC110, GC116, MC001, MA113, GA102, GA104, GA105, GA107, GA202, GA213, MA201, MA202, MA213, MA301
DL407 bụ maka iwepụ nitrate na mmiri ọableụableụ.
DL408 bụ maka mwepụ arsenic site na ngwọta obere sọlfọ acid.
DL403 bụ maka boron sitere na mmiri ọableụableụ.
Mmiri Ultrapure: Usoro Dongli MB dị njikere iji resins akwa agwakọtara maka mmiri ultrapure arụpụtara nke ọma iji gboo mkpa nke ụlọ ọrụ eletrọnịkị maka wafer na microchip mmepụta. Mkpa ndị a chọrọ ogo mmiri kachasị mma (<1 ppb Carbon Organic Carbon (TOC) na> 18.2 MΩ · cm resistivity, yana obere oge ịsa ahụ), ebe ị na -ewepụ mmetọ nke okirikiri ịdị ọcha dị elu mgbe mbụ etinyere resin mgbanwe ion.
MB100 bụ maka ịcha waya EDM.
MB101, MB102, MB103 bụ maka mmiri ultrapure.
MB104 bụ maka condensate polishing na ụlọ ọrụ ike.
Dongli na -enyekwa ihe ngosi MB resin, mgbe resin dara, ọ ga -egosi agba ọzọ, na -echetara onye ọrụ ozugbo ka ọ dochie ma ọ bụ megharịa oge.
Nri na Sugar
Dongli na -enye ahịrị resins dị elu maka shuga niile, ọka, ọka wit na cellulose decolorization, hydrolyzate, nkewa na ime ka ọ dị ọcha yana ịdị ọcha nke asịd.
Ngwọta mmiri na -ekpofu ahịhịa nwere Phenol H103
Mwepụ igwe siri ike, Arsenic (DL408), Mercury (DL405), Chromium (DL401)
Ọgwụ anwụrụ ọkụ (XAD-100)
Mwepụta ọla edo sitere na pulp cyanide MA301G
Mwepụta uranium sitere na ore MA201, GA107
Chemical & Osisi Ike
Brine a nụchara anụcha na soda ụlọ ọrụ caustic soda DL401, DL402
Ọgwụgwọ condensate na mmiri oyi dị n'ime osisi okpomọkụ MB104
Nkwadebe nke mmiri ultrapure na osisi ike nuklia.
Wepụ osisi & Nkewa
Resin D101, AB-8 bụ ngwa maka ịwepụta saponins, polyphenols, flavonoids, alkaloids na ọgwụ ahịhịa China.
Maka ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, ọnụahịa, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga -alaghachi na nkeji ole na ole.